Brezila: famoizana ilay mpitari-dalan’ny resaka niomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2009 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, polski, 简体中文, 繁體中文, Italiano, বাংলা, Español, English
Malaza amin'ny resaka niomerika any Brezila i Daniel Pádua . Saripika nentin'i Cátia Kitahara ao amin'ny WordPress-BR.
Namoy ny iray amin'ny mpitari-dalana amin'ny resaka niomerika androany (zoma) i Brezila. Nanao fizaham-pahasalamana i Daniel Pádua [pt] (fantatra amin'ny hoe @dpadua ao amin'ny Twitter) ka fantatra fa tratran'ny homamiadana ary dia lavo tao andrenivohitra Brasília androany (zoma) maraina. Tonga nanatrika matetika amin'ny resaka rindrambaiko manokatra loharano (open source) sy ny hetsika ara-kolontsaina afaka any Brezila ny lehilahy ka fitaratra ho an'ny mpamaham-bolongana maro amin'ny resaka fahavitrihana sy ny fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto.
Ao amin'ny bolongan'ny WordPress-Br, no anoratan'i [pt] Cátia Kitahara :
Nandao antsika androany i Daniel Pádua ilay akama reven'ny tontolontsika indrindra. Hisy ny fahabangana lehibe avelany noho ny talentany sy ny fahaizany ambony, ary indrindra noho ny toetrany. Maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany sy ny namany izahay.
Rehefa niely nanerana ny vohikala moa ny vaovao dia niondri-panajana teo anatrehany sy nanao veloma farany azy ny mpampiasa Twitter nahalala ny asany sy ny ezaka nataony:
Fahatsiarovana takariva @dpadua. 480N.
Ity no lahatsoratra natokan'ny Global Voices ho an'i Daniel Pádua. Mandria ampiadanana.